Bokashi Myanmar — the film! – bokashimyanmar.com
Bokashi Myanmar — the film!
by Bokashi Myanmar July 12, 2018 July 12, 20182Comments
We’ve madeafilm telling the story of what we’re doing here at Bokashi Myanmar — and why! (We’ll add Myanmar subtitles soon)
We’ll be making more films in due course to show how you can do bokashi yourself, in your home or community or workplace.
Hope you enjoy watching — and feel free to share!
Our story, Uncategorizedfeatured
Previous Entry Tea leaves = fertiliser
Next Entry Making kitchen bokashi, Part One
English text follows!!! ရန်ကုန်တောင်သူလယ်သမားဈေးကို ပလပ်စတစ်ကင်းမဲ့ဈေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရာမှာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေဈေးဝယ်သူများက သူတို့ကိုယ်ပိုင်ထည့်စရာသိုစရာလေးများပါလာတဲ့အခါ ပိုအထောက်အကူဖြစ်တာပ။ လွှင့်ပစ်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုတာ ပိုလျော့ချနိုင်လေ ပိုကောင်းလေမို့လားဗျာ။ သို့သော် သဘာဝဖြစ်ကထွက်တဲ့အမှိုက်အားလုံးကိုတော့ ကျနော်တို့ ပြန်လည်အသုံးချပေးပါတယ်။ အားလုံးကို စုကောက်သိမ်း၊ ဘိုကာရှီ ခြံဆီပြန်သယ် မြေဆွေးလုပ်ပလိုက်တာပဲ။ အားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်စေတဲ့နည်းပေါ့ဗျာ။ We’re helping to make the Farmers Market plastic free! And it’sagreat help when people bring along their own kit. The more disposables we get rid of the better! All organic waste is recycled though - we collect it and take it back to our bokashi yard to make compost. Win-win. /team Bokashi Myanmar #bokashimyanmar #zerowaste #yangonfarmersmarket #saynotoplastic
English text follows!! French institute က စိုက်ခင်းသစ်လေးကတော့ ပုံပေါ်လို့လာပါပြီ။ ကုက္ကိုယာအဖွဲ့က ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့တည်ဆောက်ရေးတာဝန်ယူပြီး ဘိုကာရှီမြန်မာက မြေဆီအခြေခံ (ဘိုကာရှီမြေဆွေးအများအပြား) အပိုင်းကို အားဖြည့်ခဲ့တာပါ။ လုပ်အားလည်းပေးရင်းပေါ့။ The new food garden at the French Institute is coming along! Team Kokkoya is setting it up, and we helped provide the soil base (lots of good bokashi compost) Should grow well, even in monsoon! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #kokkoyaorganics #institutfrancais #foodgarden urbanfarm
English text follows!!! ဈေးကထွက်တဲ့အမှိုက်။ ဒါကတော့ ကိုယ်တွေအလုပ်လုပ်ပုံပေါ့။ နေ့စဉ် တွန်းလှည်းလေးတွန်းသွားပြီး ဈေးထဲ ဆိုင်တွေက ထွက်တဲ့ အစိမ်းရောင် တနည်း သဘာဝထွက် အမှိုက်တွေနဲ့ ပြည့်မောက်နေအောင်ဖြည့်တယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဂေါ်ဖီထုပ်ကအများစု။ ကိုယ်တွေကတော့ကြိုက်ပါတယ်။ မြေဆွေးကောင်းကောင်း ရတယ်လေ ဒါက။ တနေ့ကို ကီလို ၄၀၀ လောက်ပုံမှန်ရရှိပြီး အချိန်သာပေးနိုင်မယ်ဆို ဒီ့ထက်ပိုရဖို့လည်းလမ်းစရှိပါတယ်။ ပလပ်စတစ်မပါအောင်တော့ဂရုစိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ အမှိုက်တွေကို စက်ကလေးနဲ့ အစိတ်စိတ်ဖြစ်အောင် ကြိတ်တယ်။ ခုလိုကြိတ်ချေလိုက်ခြင်းက ကိုယ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရုံသာမက လွယ်လည်းပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ ကိုယ်တွေဆီ လာပြီး လုပ်ပုံလုပ်နည်း သင်ယူချင်တယ်ဆိုလည်းပြောပါ။ ထရိန်နင်ပုံစံအမျိုးးအစားစုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်။ တွေကြပါစို့ရဲ့။ Market waste: this is how we do it! Every day we take our pushcart to our local street market and fill it to overflowing with the green waste from the stalls. At the moment we’re gettingaLOT of cabbage! Which we like. It makes great compost. We get around one-third ofaton per day and could easily get more if we had time. We make sure there’s no plastic in it then we shred it in our machine. Shredding it makes our process faster and easier. Let us know if you want to come and learn from us, we have different types of training sessions. See you! /Maung Nan and the Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #marketwaste #yangon #wetmarkets #compost
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ We’re collecting food waste every day from our local market and making bokashi compost. LOTS of it! This is what it looks like in our yard at the moment! /Bokashi Myanmar team နေ့စဉ် ရပ်ကွက်ဈေးထဲက သဘာဝဖြစ်အမှိုက်တွေ / အမှိုက်စိုတွေကို ကောက်ပြီး ဘိုကာရှီမြေဆွေး ပြုလုပ်ကြတယ်။ အများကြီးမှ အများကြီးပဲ။ ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ လတ်တလော ခြံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပါပဲ။ #bokashimyanmar #soilrevolution #northdagon #compostyard #marketwaste organicwasteisnottrash
English text follows!!! မနက်ဖြန် တောင်သူလယ်သမားဈေးကိုယူဖို့ Cocomulch ထည့်နေတဲ့ မောင်နန်း။ ဒါက စက်နဲ့ စဉ်းထားပြီး EM အကျိုးပြုအနုဇီဝ ဖျော်ရည်နဲ့ စိမ်ထားတဲ့ အုန်းဆံခွံကြိတ်ဖက်ပါ။ အပင်တွေထဲထည့်ထားလိုက်ရင် အပင်တွေကို ပြက်းထန်တဲ့ မိုးပေါက်တွေကနေလည်းကာပေးပြီး မြေဆီကိုလည်းသန်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုတောင်းကြီးတတောင်းမှ တသောင်းပဲကျတာနော်။ လာမဝယ်နိုင်ရင်လဲပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ သို့မဟုတ်လည်း နည်းနည်းပါးပါးပဲဝယ်လို့လည်းရပါတယ်။ ဈေးသင့်သင့်နဲ့ပေါ့။ အပင်လေးတွေထဲစမ်းသုံးကြည့်ပြီး ရလာဒ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ Maung Nan is preparingabasket of our “monsoon mulch” to bring to the Farmers Market tomorrow. It’s coconut husk that we have shredded and soaked in Effective Microorganisms (EM). Spread some in your potplants - it will protect them from rain and give the soilaboost. Just 10,000 ks forabig basket (we can deliver) or you can buyasmall bag from us atagood price. Test it on your plants and see! /Bokashi Myanmar monsoon team #bokashimyanmar #monsoonmulch #effectivemicroorganisms #balconygardening
English text follows!!! ဒီမနက် ဒို့အိမ်အဖွဲ့က အဖွဲ့သားတွေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်။ အဓိကဆွေးနွေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ မြို့ထဲ တိုက်နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာ မီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်အမှိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးပေါ့။ လက်တွေ့ရှုထောင့်အရတော့ လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေလေ။ ပြီးတော့ ဒါက ကိုယ်တွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့နယ်ပယ်လည်းဖြစ်နေတာကြီးကို။ လူမှုရေးရာဘက်ကနေတော့ စိန်ခေါ်မှုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့လေ။ လူတွေကို ဒီကိစ္စလုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒါမှလည်း သူတို့က အမှိုက်ကို အစို အခြောက် ခွဲခြမ်းပေးကြမှာ။ ပြီးတော့ ဒါကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီစစ်ဆေးပေးမယ့် ဒေသခံလူလည်းလိုတယ်။ ဒါကို ဘယ်သူလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စတာတွေပေါ့။ ရေရှည်အနေနဲ့ကတော့ ရွေးချယ်စရာလည်းမရှိပါဘူး။ သဘာဝကထွက်တဲ့အမှိုက်ဟာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါကို အလုပ်ဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းရှာရမှာပေါ့။ဒါသည်ပင် ကိုယ်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတရပ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လဲ ခပ်သေးသေးလေးတွေစလုပ်ကြည့်နေတာပါ။ ဒါက နောက်ဆုံးကျတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။ We hadagreat discussion with the team from Doh Eain this morning. The project we’re discussing is food waste management in downtown alleys. Absolutely doable fromatechnical point of view (after all, this is what we do). But the social aspects are challenging, and somehow people need to be motivated to separate their trash (wet/dry) and someone has to make sure its done right atalocal level (who? how?) In the long term we have no choice - organic waste is valuable. Finding the best process to make it work is our challenge just now. So we’re taking baby steps and working it out. This will be good! /Bokashi Myanmar compost team #bokashimyanmar #doheain #placemaking #organicwasteisnottrash #soilrevolution #communitygardens
English text follows!!! ဟောဒါ ဘိုကာရှီမြန်မာဟန် မီဒီယာကိစ္စ လေ့ကျင့်ပုံ။ မနက်ဖြန်မနက် Good Morning Myanmar ရဲ့ မနက်ခင်း အသီအစဉ်အတွက် ကိုယ်တွေကို ဖိတ်ထားတာမို့။ စောင့်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးကြအုံးနော်။အချိန်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ မကြည့်ဖြစ်မိရင်တော့လဲ နောက်မှ ဖေ့ဘုတ်မှာ ပြန်ရှယ်ပေးနိုင်မယ်မျှော်လင့်ရတာပ။ ရင်ကတော့ ခပ်ခုန်ခုန်ရယ်.... This is media training Bokashi Myanmar style! Tomorrow morning we’re invited into the studio for the Good Morning Myanmar breakfast show. Tune in and watch, if you have the time! Otherwise let’s hope we can share it online with you later. Exciting! /Bokashi Myanmar tv guys😉 #bokashimyanmar #goodmorningmyanmar #soilrevolution pleasewatch
Good mornlng to our lovely friends from Kokkoya Organics! They’re here to pick upabarrel of bokashi bran. But first we use it foracoffee table! /Bokashi Myanmar and friends ကုက္ကိုယာဩဂဲနစ်က သမီးလေးတွေနဲ့ မောနင်းမင်္ဂလာ။ သူတို့က ဒီကို အီးအမ်ဖွဲနုဘိုကာရှီ ပုံးလာယူတာ။ သူတို့ ယူမသွားခင် ကိုယ်တို့က ဒီပုံးကို လ္ဘက်ရည်စားပွဲလုပ်လိုက်သေးတယ်ရယ်။ #bokashimyanmar #kokkoyaorganics #favoritecollegues #urbanfarmingwithcoffee
New veggie garden at the French Institute! Yay! French Institute က စိုက်ခင်းအသစ်လေး။ ဝေး.....😁 #bokashimyanmar #kokkoyaorganics #frenchinstitute #yangon #soilrevolution #monsoonmulch
English text follows!!! Parasol မှာ စိုက်ခင်းလေးလုပ်နေကြတယ်။ ဒီလိုပွဲလေးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတာအရမ်းလည်းကောင်းပါတယ်။ ကုက္ကိုယာဩဂဲနစ်နဲ့ parasol အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးပါဗျာ။ပါဝင်ခွင့်ပေးလို့။ မြေကတော့ပြင်ပြီးပြီ။ အခု အပင်စိုက်ကြစို့ဗျို့။ We’re buildingagarden at Parasol! Nice to be part of this - thanks to Kokkoya Organics and Parasol for including us🌱🌱🌱 The soil is in, now lets grow some veggies! /Team Bokashi Myanmar #bokashimyanmar #kokkoyaorganics #parasol #yangonsbestcompost #greatteamwork
English text follows!!! ခြံထဲ ဘိုကာရှီလေ့လာရေး ခရီးစဉ်လာကြတာကို သဘောကျပါတယ်။ စိုက်ပျိုးခြံပိုင်ရှင်တွေ၊ ဟော်တယ်ဘက်ကလူတွေနဲ့ ဦးသန့်ပြတိုက်ကမိတ်ဆွေတချို့ ဒီနေ့ တောင်သူလယ်သမားဈေးအပြီးမှာ ခြံထဲကို လာရောက်လည်ပတ်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ လူတိုင်း မြေဆီလွှာကောင်းကောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ We love #bokashivisitors in our yard! A group of curious people came up today after the Farmers Market, gardeners, hotel people, museum people. Everyone needs good soil! /Bokashi Myanmar team #goodsoilgoodlife #bokashimyanmar #uthanthouse #inleheritage #organicvalley #northdagon #soilrevolution
English text follows!!! ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းလေးတစ်ခုကို ကိုယ်တွေနဲ့တူတူလာတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်နော်။ ဒီတနင်္ဂနွေ၊ French Institute မှာပါ။ ကိုယ်တွေက မြေဆွေးယူလာပါမယ်။ ကုက္ကိုယာဩဂဲနစ်အဖွဲ့က ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပက်လေးတွေနဲ့အတူ ဦးစီးဦးဆောင်လည်းပြုပေးပါမယ်။ Parasol အဖွဲ့ကတော့ သောက်စရာလေးတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမှာပါနော်။ တနင်္ဂနွေနေ့ အဲဒီမှာ တွေ့ကြမယ်လေနော်။ Come buildavegetable garden with us! This Sunday, at the French Institute. We’re bringing compost, Kokkoya Organics is bringing the veggies and the leadership, and Parasol is making the drinks! See you there? https://www.facebook.com/events/340501966847845/?ti=icl